घरको गमलामा घ्युकुमारी रोप्ने गर्नु भएको छ?संसारकै भाग्यमानीमा पर्नु हुन्छ,अरु बिरुवा हटाए पनि घ्युकुमारी कहिले नहटाउनुहोला,यस्ता छन् कारण स्वास्थ्य | सुदुरपश्चिम खबर
घरको गमलामा घ्युकुमारी रोप्ने गर्नु भएको छ?संसारकै भाग्यमानीमा पर्नु हुन्छ,अरु बिरुवा हटाए पनि घ्युकुमारी कहिले नहटाउनुहोला,यस्ता छन् कारण स्वास्थ्य
१६. दाद आए
मा:दाद आएमा घ्यू कुमारी, लसुनमा पिनेर लेप लगाउने गरेमा दाद आएको ठिक हुन्छ ।कसरी बनाउन सकिन्छ घ्यूकुमारीको फेस प्याक ? जान्नुहोस
काँक्रो – घ्यूकुमारी प्याक:घ्यूकुमारीलाई राम्ररी सफा गरेर यसको जेल निकाल्नुहोस् । एउटा काँक्रो कोरेसोमा कोरेर त्यसको रस निकाल्नुस् । त्यो रसलाई जेलमा मिसाउनुस् । त्यसमा अलिकति गुलाबजल पनि हाल्नुस् ।samacharlibrary.com बाट सभार